दुई समूहबिच कुटपिट हुदा एक युवकको मृत्यु
पाँचथर, पुस २२। सानो विवादबाट शुरु भएको झगडाले पाँचथरको सिदिन ४ मा दुई समूहबिच कुटपिट हुदा एक युवकको मृत्यु भएको छ । घटनामा सुरेन्द्र
मंगोलिउन आर्मी बताउने दुई महिला सहित १७ जना पक्राउ
रुकुम, पुस २२। आफूहरुलाई मंगोलिउन आर्मी मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बताउने राजेश पुनसहित १७ जना पक्राउ परेको छ । पक्राउ परेका दुई जना महिला छन्
फोहोरको थुप्रोमा नवजात शिशुको शव भेटियो
पोखरा, पुस२२। फोहोरको थुप्रोमा एक नवजात शिशुको शव फेला परेको छ। पोखरा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रालिले लेकसाइडबाट सङ्कलन गरी ल्याएको फोहोरभित्र बिहीबार शिशुको शव भेटिएको
मौसममा केहि परिवर्तन आएपछि मनाङको जनजिवन सामान्य बन्दै
मनाङ, पुस २३। उपल्लो हिमालपारीको जिल्ला मनाङमा एकसातादेखि लगातार भैरहेको हिमपात सामान्य सुधार भएपछि त्यहाको जनजिवन सामान्य वन्दै गएको छ । १७ गतेदेखि परेको हिउँ अझै नरोकिएपछि
स्वर्णजयन्तीको अवसर पारेर कान्ति बाल अस्पतालद्धारा बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार
काठमाडौं, पुस २२। कान्ति बाल अस्पतालले आफ्नो स्वर्णजयन्तीको अवसर पारेर आज उपचारका लागि आएका सबै बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । तर यस्तो
यहि सरकारले नयाँ विमान खरिद गर्न : विष्ट
काठमाडौं, पुस २२। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री लोकेन्द्र विष्टले नेपाल एशोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेण्टको ४८ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै नयाँ विमान यही सरकारले
प्रधानमन्त्री भट्टराईले १२ दिनको म्याद भित्रमा शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए कुर्सीमा बस्न नदिने चेतावनी : नेपाल
काठमाडौं, पुस २२। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले १२ दिने म्याद मागेकाले त्यससमयभित्रमा शान्ति प्रक्रिया नटुंग्याए
सेनाले बम डिष्पोजल गरेपछि बिहान साढे ३ बजेबाट रोकिएको यातायात सुचारु
नेपालगन्ज, पुस २२। नेपालगन्जको कोहलपुर सडक खण्डमा सशस्त्र समुहले राखेको तीनवटा बम सेनाको बम डिष्पोजल टोलीले निष्कृय पारेपछि बिहान साढे ३ बजेबाट रोकिएको उक्त सडक खण्डको
भारतीय यात्रुबाहक बस पल्टँदा चार जना घाइते
धादिङ, पुस २२। धादिङको भिमेस्थान गाविस अक्षेते मोडमा भारतीय यात्रुबाहक बस पल्टँदा चार जना घाइते भएका छन् । भारतबाट पशुपतिनाथ दर्शनका लागि नेपाल आएका उनीहरुको भारतीय नम्बर
हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरवन्दी खाली
भद्रपुर , पुस २१ । जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्यमन्त्री राजेन्द्र महतोले मुलुकभरिका स्वास्थ्यकेन्द्रमा हजारभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी खाली रहेकाले ऐन संशोधन गरी विज्ञापन गरिने बताएको छ ।
नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय
कैलाली, पुस २१। कैलालीको धनगढी नगरपालिका ट्राफिक चौराहामा भेटिएको बम नेपाली सेनाको बम डिस्पोजल टोलीले निष्क्रिय गरेको छ । ट्राफिक
जंगली हात्तिको आक्रमणबाट तीनको मृत्यु
झापा, पुस २२। झापाको पृथ्वीनगरमा जंगली हात्तिको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा स्थानीय दुर्गा पाण्डे, आइतमाया राई र बनमाया बस्नेत रहेका छन्
विभिन्न माग राख्दै बहिर्गमित लडाकुको बन्द आहृवान
काठमाडौं, पुस २१ । अयोग्यमा परेका एमाओवादीका लडाकुहरुले गरेको नेपाल बन्दका कारण आज देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । अनमिनले आफूहरुलाई अयोग्य भनि अपमान गरेको भन्दै उनीहरुले अयोग्यको
बाबुराम भट्टराई र अमेरिकी राजदूत स्कट एच डेलिसीबीच छलफल, डेलिसीद्धारा दलहरु मिलेर अगाडी बढ्न आग्रह
काठमाडौं, पुस २१ । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई र अमेरिकी राजदुत इस्टक एच टेलिसीबीच शान्ति प्रक्रियाको विषयमा छलफल भएको छ । सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटमा
कुलेश्वरदेखि बल्खुसम्म हाललाई घर नभत्काउन आदेश : सर्वोच्च
काठमाडौं, पुस २१। बिना मुआब्जा घर भत्काउँदा आफूहरु मर्कामापर्ने भन्दै त्यस क्षेत्रका ६१ जनाले दिएको रीटको सुनुवाइ गर्दे न्यायाधीशद्वय ताहिर अलि अन्सारी र भरतबहादुर कार्कीको इजलासले
बर्हिगमित लडाकुद्धारा गरिएको नेपाल बन्दको आशिंक प्रभाव
काठमाडौं, पुस २१। सम्मानजनक पुनःस्थापनालगायतका माग राखेर बहिर्गमनमा परेका माओवादी लडाकुले आज नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । बन्दका कारण देशभरको जनजीवनमा सामान्य प्रभावित परेको छ
थाईल्याण्डका राजदूत भिक्षु जीवनको अनुभव गर्नका लागि लुम्बिनीमा
लुम्बिनी, पुस २१। नेपालका लागि थाईल्याण्डका राजदूत मारिस सांगियामपोंग्सालाई भिक्षु जीवनको अनुभव गर्न केही दिनदेखि लुम्बिनीमा ध्यानमा नै व्यस्त रहेको छ । भगवान बुद्धले बिताएको
काठमाडौं, पुस २१। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शहिद गेटमा रहेको त्रिभुवनको शालिक त्यहाँबाट हटाएर नारायणहिटी संग्रालयमा सार्ने निर्णय गरेपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बुधबार व्यवस्थापिका संसद
गलत विचार बोकेको पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले शान्ति र संविधानले पूर्णता पाउन नसकेको : पोखरेल
बागलुङ, पुस २०। नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेलले गलत विचार बोकेको पार्टी नेतृत्वमा रहेकाले शान्ति र संविधानले पूर्णता पाउन नसकेको आरोप लगाएको छ । आज प्रेस
सरकारले विद्यार्थीका लागि रासन कार्ड दिने तयारी
काठमाडौं, पुस २०। नेपाल सरकारले विद्यार्थीका लागि रासन कार्ड दिने तयारी गरिरहेको छ । ६० बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री समक्ष छलफल गर्न गएको अखिल क्रान्तिकारीको टोलीलाई सरकारी
चिसो बढेपछि बालबालिकामा निमोनिया
उदयपुर, पुस २० । केही दिनदेखि यता एकाएक चिसो बढेपछि उदयपुरका बालबालिकालाई निमोनियाले प्रभाव पार्न थालेको छ । त्रियुगा नगरपालिकाको वडा नं ३, ५ र ९ का अधिकांश बालबालिकामा निमोनिया
सुदूरपश्चिम आमहड्तालले आज पनि जनजिवन प्रभावित भएको छ
धनगढी,पुस २०। हिन्दु धर्मवादी संस्था हिन्दू धर्म बचाउ अभियान नेपाल र स्नेही महिला जागरण नेपालले आब्हान गरेको दुई दिने सुदूरपश्चिम आमहड्तालले बुधवार यस क्षेत्रको जनजिवन प्रभावित भएको
आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र सरकारका बीच कार्यदल गठन
काठमाडौं, पुस २० । विभिन्न माग राखी आन्दोलनरत अखिल क्रान्तिकारी र सरकारका बीच कार्यदल गठन गरी समस्या सामाधान गर्ने सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम
माओवादीले अझै पनि कब्जा गरेका घरजग्गा र सम्पत्ति फिर्ता नगरेकोमा आपति : कोइराला
काठमाडौं, पुस २०। नेपाली कांग्रेस पर्वतका पुराना कार्यकर्ता बखतबहादुर कुँवरको ४५औं पून्य तिथिको अवसरमा राजधानीमा आयोजित श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीले कब्जा गरेका
कार्यकारी अधिकार एकजनालाई दिनुपर्ने : वैद्य पक्ष
काठमाडौं, पुस २०। एमाओवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा राज्यको शासकीय स्वरुपबारे विवाद आएको छ । बैठकमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मध्ये कुनै एकलाई कार्यकारी
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार विभाजन काग्रेसलाई स्विकार्य छैन् - महामन्त्री सिंह
काठमाडौ, पुस १९ । नेपाली काग्रेसका महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा कार्यकारी अधिकार विभाजन गर्ने कुरा काग्रेसले नस्विकार्ने स्पष्ट पारेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार
माओवादीले शान्तिप्रक्रियालाई कमाई खाने भाँडो बनयो : ओली
सुनसरी, पुस १९। नेकपा एमालेका नेता एवं पुर्व उपप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सत्तासिन एकीकृत नेकपा माओवादीले कमाईखाने भाँडो बनाएकाले समयमै संविधान बन्न नसकेको आरोप लगाउनुभएको
मैदान छोडेर भाग्दैन सबैले ढुक्क भएहुन्छ : प्रधानमन्त्री
विराटनगर, पुस १९ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजनैतिक स्थायित्व विना आर्थीक विकास असम्भव भएकोले सरकार निर्धारित समयमै शान्ति र संविधान निर्माणमा जुटेको बताएको छ ।
नागरिक सुरक्षा र अपराध नियन्त्रण नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्राथमिकता - महानिरिक्षक
धादिङ, पुस १९ । प्रहरी महानिरिक्षक रविन्द्रप्रताप शाहले नागरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रणमा कठोरता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शुन्य शहनशिलता नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ । प्रहरी
डिजेल प्लान्ट वा लोडसेडिङको बिकल्प छैन : उर्र्जामन्त्री बोगटी
काठमाडौ, पुस १९ । उर्र्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले सरकारसँग डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्नु वा लोडसेडीङ बढाउनुको विकल्प नभएको बताएको छ । मागको एक तिहाईमात्र उत्पादन भईरहेकाले यस्तो स्थिति
Pages 132 : You are at page 93 of 132